Umkhiqizi Nomhlinzeki Oqhubekayo we-SPY90-SPY120 oqhubekayo I-Dongshen
Ngaphakathi kobuhlalu obuluhlaza be-EPS, kukhona igesi eqhumayo ebizwa nge-pentane. Ngemuva kokuphunga, ipentane liqala ukunweba ngakho-ke usayizi wobuhlalu nawo uyakhula, lokhu kubizwa ngokuthi ukunweba. Ubuhlalu obuluhlaza be-EPS abunakusetshenziswa ukwenza amabhlogo noma imikhiqizo yokupakisha ngqo, bonke ubuhlalu budinga ukwandiswa kuqala bese benza eminye imikhiqizo. Ubuningi bomkhiqizo bunqunywa ngesikhathi sePreexpanding, ngakho-ke ukulawulwa kokuminyana kwenziwa ePreexpander.
I-EPS Continuous Preexpander iyasebenza ukukhulisa impahla eluhlaza ye-EPS kumandla adingekayo, umshini usebenza ngendlela eqhubekayo kokubili ekuthatheni impahla eluhlaza nokukhipha impahla enwetshiwe. I-EPS Continuous Pre-expander ingenza ukunwetshwa kwesibili nokwesithathu ukuthola ukuminyana okuphansi.
I-EPS Continuous Preexpander iqedile nge-Screw Conveyor, owokuqala nowesibili wokulayisha wokulayisha, Igumbi Lokunweba, Umbhede we-Fluidized bed Drier
I-EPS Continuous Preexpander uhlobo loMshini We-EPS osebenza ngokulawulwa kwemishini. Impahla eluhlaza ye-EPS igcwaliswa kuqala kusuka ku-screw conveyor kuya kulayishi wokunweba. Ngaphansi kwesilayidi kukhona isikulufa, ukuhambisa impahla kusuka kulayishi iye ekamelweni lokunweba. Ngesikhathi se-steaming, shaft evuthayo ihamba njalo ukwenza ubukhulu bezinto bube nokulingana. Ukuthungwa kwempahla eluhlaza ekamelweni ngokuqhubekayo, futhi ngemuva kokushisa, izinga lezinto ezibonakalayo likhuphuka ngokuqhubekayo, kuze kube yilapho ileveli ebonakalayo ifika ezingeni elifanayo lokukhipha imbobo yokuvula, khona-ke impahla izophuma ngokuzenzekelayo. Ukuphakama kokuvuleka kukhulu, lapho impahla ihlala isikhathi eside emgqonyeni, ngakho-ke ukwehla kwabantu kuncane; lapho ukuvuleka kokukhipha kungaphansi, okufushane lapho impahla ihlala emgqonyeni, ngakho-ke ubukhulu bokuba phezulu. Ukulawulwa komshini owandayo wangaphambi kokunweba kulula kakhulu. Ukuthi ingcindezi yesitimu izinzile noma cha inethonya elikhulu ekucineni kwabantu. Ngakho-ke, umshini wethu oqhubekayo wangaphambi kokunweba ufakwe i-valve yokunciphisa ingcindezi yaseJapan. Ukuze senze ukucindezela kwesitimu emshinini kuzinze kakhudlwana, sisebenzisa isikulufa ukondla okokusebenza ngejubane elingafani, futhi umusi ofanayo nokufunza okufanayo kufana ngendlela efanayo.
Into I-SPY90 SPY120
Igumbi lokunweba Ububanzi Φ900mm Φ1200mm
Ivolumu 1.2m³ 2.2m³
Ivolumu esebenzayo 0.8m³ 1.5m³
Intuthu Ukungena DN25 I-DN40
Ukusetshenziswa 100-150kg / h I-150-200kg / h
Ingcindezi 0.6-0.8Mpa 0.6-0.8Mpa
Umoya ocindezelweyo Ukungena I-DN20 I-DN20
Amapayipi amanzi Ukungena I-DN20 I-DN20
Okufakwayo 15g / 1 250kg / h 250kg / h
Umugqa wokuhambisa impahla I-DN100 Φ150mm
Amandla 10kw 14.83kw
Ubuningi Ukunwetshwa kokuqala 12-30g / l 14-30g / l
Ukunwetshwa kwesibili 7-12g / l 8-13g / l
Ubukhulu jikelele L * W * H 4700 * 2900 * 3200 (mm) I-4905 * 4655 * 3250 (mm)
Isisindo 1600kg 1800kg
Kudingeka ukuphakama kwegumbi 3000mm 3000mm
Langaphambilini I-PB2000V-PB6000V Umshini wohlobo lomshini wokubumba wokuvimba
Olandelayo: Uhlobo lwe-DS1100-FDS1660 EPS Batch type expander pre